मेस्सीले ला लिगाको पहिलो खेल गुमाउने ! – Dcnepal
मेस्सीले ला लिगाको पहिलो खेल गुमाउने !
प्रकाशित : २०७६ साउन २९ गते ९:४१
एजेन्सी। स्पेनिस क्लब बार्सिलोनाका कप्तान लियोनेल मेसीले यस सिजनको ला लिगाको पहिलो खेल गुमाउने भएका छन् । हाल चोटका कारण फिटहुने क्रममा रहेका मेसीले शुक्रबार राति बिल्बाओसँग हुने ला लिगाको पहिलो खेल नखेल्ने प्रशिक्षक इर्नेस्टो भालभेर्डोले जानकारी दिएका छन् ।
भालभेर्ड़ोले शुक्रबारको खेलमा मेसी खेल्ने सम्भावना निकै कम रहेको बताए । मेसी खेल्ने अनिश्चित भएपछि बार्सिलोना मेसी बिना नै एथलेटिको बिल्बाओसँगको खेल खेल्ने तयारी गरेको छ । भालभेर्ड़ोले भने, ‘मैले मेसी बिल्बाओविरुद्ध खेलुन भन्ने कामना गरिरहेको छु तर मुश्किल देखिएको छ ।’
दाहिने तिघ्रामा समस्या भएका कारण मेसी बार्सिलोनाले गरेको प्रिसिजनको अमेरिका टुरमा समेत सहभागी भएका थिएनन् । सो टुरमा बार्सिलोनाले इटालियन क्लब नापोलीलाई दुवै खेलमा पराजित गरेको थियो । बार्सिलोनाले नयाँ सिजनको पहिलो खेल नेपाली समय अनुसार शुक्रबार राति १२ः४५ मा खेल्दै छ ।